राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादीबाट १४ पदमा ६ दर्जन आकांक्षी, रामबहादुर उम्मेदवार बन्लान् ? – Etajakhabar
राष्ट्रियसभा चुनावमा माओवादीबाट १४ पदमा ६ दर्जन आकांक्षी, रामबहादुर उम्मेदवार बन्लान् ?
काठमाडौं, ९ माघ । एमालेसँग चुनावी तालमेलका आधारमा राष्ट्रियसभाको १४ सिटमा उम्मेदवारी दिन लागेको माओवादी केन्द्रमा ६ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टी हेडक्वार्टरले सकभर सहमति, नभए बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे पनि कतिपय प्रदेश कमिटीले एउटै सिटका लागि १० जनासम्म नाम पठाएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सर्वसम्मत रूपमा कसैको पनि नाम सिफारिस नआएको माओवादीले जनाएको छ । सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी शीर्ष नेता र प्रदेश इन्चार्जको बैठकमा सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज/संयोजकहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा पार्टीको भागमा परेको सिटमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको ६ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ‘प्रदेश कमिटीले हेडक्वार्टरलाई सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ, अब शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।
रामबहादुर थापा चुनाव लड्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभामा भने उम्मेदवार बन्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको तालमेलका आधारमा प्राप्त गरेको प्रदेश ३ को खुलातर्फ थापा उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्। प्रदेश कमिटीले थापासहित लीलामणि पोखरेल र कृष्णप्रसाद सापकोटाको नाम खुलातर्फकै उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ। मंगलबार उनीसहित बस्ने तीन शीर्ष नेताको बैठकले अनुमोदन गरे उनी राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०९, २०७४ समय: ७:५९:४१